Puntland oo uu ka bilawday Cilmi-baaris lagu samaynayo Cudurada Dhiigkarka iyo Sonkorta. | Maakhir News	Home
Wednesday, July 11th, 2012 | Posted by adminone Puntland oo uu ka bilawday Cilmi-baaris lagu samaynayo Cudurada Dhiigkarka iyo Sonkorta.
Cilmi-baaris lagu samaynayo Cudurada Dhiigkarka iyo Sonkorta ayaa ardayda Jaamacadda Bariga Africa waxay ka bilaabeen magaalada Garoowe.
Cilmi-baaristan oo ay filinayaan Ardayda jaamacada Bariga Africa ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Wasaarada caafimaadka Puntland waxaana dhinaca fanka ka taageeraya Shirkada Isrgaarsiinta gayigeena ee Golis Telecommnunication.
Kulankii Furitaanka Cilmi baaritan oo maanta ka dhacay magaalada Garoowe ee caasumada Puntland waxaa ka soo qaybgalay Masuuliyiinta Wasaarada caafimaadka puntland, masuuliyiinta jaamacadda Bariga Africa, Masuuliyiinta Shirkada Isgaarsiinta caalamiga ah ee Golis, Aqoonyahanka Cilmibaaristan fulinaya iyo marti sharaf kale oo farabadan waxaana laga soo jeediyay khudbado kookooban oo lagu abaarayo muhiimada ay Cilmi-baaristani leedahay.
Agaasimaha guud ee Wasaarada caafimaadka puntland oo ka mid ahaa Masuuliyiintii kulankan ka dhashay ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay cuduradan Dhiigkarka iyo Sonkorta wuxuuna carabaabay in ay ka dhashaan cabitaanada badan hadana Macaanka ah ee aan cabno soomaali ahaan iyo Cuntada faraha badan aan cuno hadana aynaan Wax Excersise ah samayn si jirkeena uu qashinku uga baxo.
Agaasimuhu wuxuu bulshada u jeediyay talooyin wax ku ool ah oo la xiriira calaamada iyo siyaabaha ay cuduradani ku dhashaan wuxuuna ugu baaqay in ay socod badan sameeyaan si jirkoodu uu u gubo Protein badan oo uu kaydsanayay cuduradana ay ka dhalan lahaayeen.
Ardayda jaamacada Africa ee Cilmi-baaristan samaynaya ayaa sheegay in Cilmi-baaristani ay horay uga sameeyeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari islamarkaan ay ku ogaadeen in 400 oo qof ay ka baareen Cudurada Sonkorta iyo Dhiigkarka 80 ka mid ahi ay qabana cudurka Sonkorta taas oo u dhiganta 9% dadkii ay baareen halka Dhiigkarkana ay ogaadeen in 36% dadkii ay baaritaanka ku sameeyeen ay qabaan.
Wasiirka caafimaadka puntland Mudane Cali C/laahi Warsame Puntland oo kulankan soo xiray ayaa talaabo horumar leh oo aqoonyahanka puntland uuq aaday ku sheegay Cilmi-baaristani wuxuuna xaqiijiyay in ay tahay talaabo loo bahan yahay wax badanna ka tiri karta caafimaadka bulshada.
Wasiirku wuxuu aad u dhiirigaliyay dhalinyarada Cilbi-baaristani samaynaysa wuxuuna kula dardaarmay in ay si wanagasan oo ku salaysan xaqiiqada jirta uga keenaan cuduradan iyo xalka bulshadu ay uga gudbi karto iyadoo lagu dhiirigalinayo siyaabaha marka horeba looga hortgao in ay dhashaan Cuduradan.
Maahan Markii ugu horaysay ee Cilmi-baaris noocan ah laga sameeyo deegaanada Puntland, waxayse ardayda jaamacadan Bariga Africa Sidan oo kale Ololahan uga soo fuliyeen magaalada Boosaaso ee gobolka bari iyadoo waliba Cilmi-baaristani ay u dheertahay dawaynta bukaanada ay xanuunadan ka helaan